Monday May 04, 2020 - 14:35:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Donald Trump oo ah madaxweynaha Mareykanka ayaa hanjabaad hawada umariyay dowladda shuuciyadda Shiinaha oo uu sheegay in ay ciqaab adag wajahi doonto haddii ay ku cadaato in ay mas'uul ka aheyd abuuridda cudurka Carona ee caalamka rogay.
Trump oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Washington ayaa dowladda shiinaha ku eedeeya mas'uuliyad darro iyo in aysan xil iska saarin xakameynta Carona oo ah cudur kasoo bilaawday bartamaha shiinaha.
wuxuu adkeeyay warbixinada ay faafiyeen warbaahinta Americanka ee sheegaya in Virusku ka baxsaday Macmal ama Laab kuyaal magaalada Wuhan ee dhacda bartamaha dalka shiinaha islamarkaana ay maamulayaasha xukuumada Bijiin ku guuldarraysteen in ay xakameeyaan.
Warbixinno la aruuriyay ayaa si hordhac ah usheegaya in markii ugu horraysay dabayaaqadii bishii decembar 2019 uu Viruska Carona si aan ula kac aheyn uga baxsaday macmalka wuhan kadibna uu haleelay dad shiinays ah wixii xilligaas ka dambeeyana ay dowladda shiinaha ku adkaatay in ay xakamayso.
Machadka cilmiga Faruusaadka shiinaha oo kuyaal meel aan ka fogeyn suuqa hilibka xayawaanaatka Wuhan ayay fartu ku godantahay balse mas'uul u hadlay dowladda shiinaha ayaa iska fogeeyay eedaymaha loo jeediyay wuxuuna sheegay in ammaanka macmalka Fayruusaadka Wuhan uu yahay mid adag.
Warbixin ay faafisay shabakad laga leeyahay wadanka Mareykanka ayaa caddeynaysa in tirada dadka shiinaha ugu dhintay Carona ay ka badanyihiin 21 milyan oo ruux, shabakadda Intercept waxay sheegtay in baaritaanno hordhac ah ayaa xaqiijinayaan dhimashada malaayiin ruux Shiinays ah oo dhammaantood uu gallaaftay Carona Virus.
dowladda shiinaha ayaa la sheegay in ay waxbadan oo ku saabsan dadka udhintay Carona qarinayso iyadoo aad usoo koobtay tirada dadka dhintay , indhaha warbaahinta caalamka ayaa ku taagan shiinaha oo ah halka uu kasoo bilaawday Carona halka Mareykanku uu doonayo in uu indhaha caalamka ka jeediyo musiibada dadkiisa baabi'inaysa uuna Shiinaha ka dhigo midka mas'uulka ka ah dhibkan caalamka saameeyay.